Isixhobo siza kunye nevidyo kliphu ebonisa ukuba kulula kangakanani ukusetyenzwa kwaye kusetyenziswe ukufunwa kwedatha yakho. Emva kokubukela le vidiyo, uza kufunda indlela elula ngayo indawo kunye nekhonkco yokucofa. Into eyiyo ngokwenene kwesi sixhobo kukuba ayifuni naluphi na ikhowudi yokuqwalasela. Inokuqwalaselwa ukuba ichane idatha kwiyiphi na iwebhusayithi eneenkcukacha ezimbalwa ze mouse yakho. Ukukhetha idatha ukuba ichithwe, kufuneka kuphela ukukhomba imouse yakho kwizinto zeenkcukacha. Ukuyivavanya, unokwenza uvavanyo lwalo lwendlela yokuvavanya, kwaye ungabukela kwakhona ukuboniswa kwevidiyo Source .
Akufuneki ikhowudi yokumisela nokusetyenziswa